Kedu otu esi ebuli sistemụ arụmọrụ GNU / Linux? | Site na Linux
Kedu otu esi ebuli sistemụ arụmọrụ GNU / Linux?
Ngwa iji bulie GNU / Linux
Optimising, ma ọ bụ kpọmkwem optimizing anyị Sistemụ bụ iji melite arụmọrụ nke otu, site na mmezu nke ụfọdụ ezi uche (software) ma ọ bụ nkịtị (ngwaike) mgbanwe. N'ihe banyere mgbanwe nke ngwaike, Sistemụ arụmọrụ nwere ike irite uru site na mmelite ma ọ bụ abawanye na Space Disk Diski, Ebe nchekwa RAM, Typedị CPU, n'etiti ihe ndị ọzọ.
N'ihe gbasara anyị maka akwụkwọ a, ndụmọdụ ma ọ bụ nkwanye ga-adị n'ọkwa ezi uche dị na ya iji ngwa ma ọ bụ mmezu nke ọrụaka ọrụ nke na-enye anyị ohere ijigide ọkwa arụmọrụ na arụmọrụ nke sistemụ arụmọrụ anyị na efu efu.
1 Ebuli site na iji Ọnụ
1.1 Buru ụzọ ma prelink
1.2 Deborphan na Localepurge
1.3 Ntọala Ọnụ
2 Na ọkwa nke ngwa eserese
2.2 yiri mango
Ebuli site na iji Ọnụ
Maka ndị hụrụ Terminal na programmed Script, enwere nhọrọ ndị a:Etu esi eme GNU / Linux Mmezi site na iji edemede? y Otu esi eme ndabere data na akụrụngwa site na iji Shell Scripting? nke anyi kwuru maka ya na nso nso a. Ihe omuma abuo ndia kpuchitere ihe di nkpa iji dobe sistemụ arụmọrụ anyị, nke ga-eme ka sistemụ arụmọrụ anyị emelitere ma nwekwaa mkpofu dijitalụ ma debe data edobere na ya
Otú ọ dị, mmezu nke ihe omume ndị a na akwụkwọ ntuziaka ma ọ bụ akpaaka nwere ike jikọtara ya na ntinye nke ụfọdụ ngwugwu ma ọ bụ ngbanwe nke ụfọdụ iji bulie ogo arụmọrụ, kwụsie ike na / ma ọ bụ nchekwa nke OS Ihe atụ dị mma nke iji njikarịcha rụọ ọrụ nwere ike ịbụ ntinye na nhazi nke nchịkọta. »Buru ụzọ» na »Prelink« tinyere nchịkọta »Deborphan» na »Localepurge«.
Buru ụzọ ma prelink
Buru bụ ọnụ ngwa na nyocha nke ngwa ndị akacha eji, ma buru ha ibu na ebe nchekwa RAM nke ngwaọrụ ahụ si otú mbenata mmalite mmalite gị mgbe ị na-agba ọsọ ha. Mgbe Njikọ njikọ Ọ bụkwa a ọnụ ngwa ma na ọ bụ ọrụ ya maka ịgba ọsọ ngwa ngwa nke ụlọ akwụkwọ OS yana ngwa dị mkpa.
Jiri ngwa 2 ndị a ọnụ, ịnwepụta usoro GNU / Linux dị mfe.
Deborphan na Localepurge
Deborphan bụ ịba uru na-ahụ ngwugwu "ụmụ mgbei" na Sistemụ nrụọrụ anyị. Ka anyị cheta na otu ngwugwu bụ na »nwa mgbei» ọnọdụ mgbe iwepu a nne na nna ngwugwu (ngwugwu na installs ndị ọzọ site dependencies na-akpaghị aka), kwuru »nwa" ngwugwu na-anọgide arụnyere na disk enweghị ihe ọ bụla ojiji, bi na-abaghị uru ohere.
Deborphan na-ekpebi ngwugwu ndị na-enweghị ndị ọzọ dabere na nrụnye gị, ma gosi gị ndepụta nke nchịkọta ndị a. Isi ya na-aba uru na-achọ ọba akwụkwọ, mana enwere ike iji ya na nchịkọta sitere na ngalaba niile.
Enwere ike iji Deborphan mee ihe site na iji usoro iwu ndị a:
Mgbe Localpurge bụ ịba uru na-ehichapụ akwụkwọ ntuziaka niile na enyemaka nke dị n'asụsụ na-abụghị nke ndị ahazi n'ime sistemụ arụmọrụ anyị.
Nke a bara ezigbo uru ebe ọ bụ na ọtụtụ ngwa dị iche iche na-etinye akwụkwọ ntuziaka na enyemaka, n'asụsụ anyị ugboro ugboro (Spanish na Bekee), yana n'asụsụ ndị ọzọ anyị agaghị eji. Nke a na-agba ọsọ na-ewe ọtụtụ ohere na draịvụ ike anyị, yana data anyị na-agaghị eji.
Ngwa ndị ọzọ a na-eme ka ọ dịrị anyị mfe iji bulie sistemụ arụmọrụ GNU / Linux.
N'ime mgbanwe ndị a pụrụ ịgụnye nwere ike ịbụ:
Jiri, ma e wezụga mgbọrọgwụ onye ọrụ, onye ọrụ njikwantụgharị onye ọrụ nwere ikikere mgbọrọgwụ ahaziri iji jiri sudo iwu, na onye ọrụ nkịtị maka onye ọrụ ọ bụla ịbanye n'ime kọmputa iji ya.
Jiri ihe ndekọ ndekọ ihe omume, nke na-edekọ iwu ọ bụla edepụtara n'ime njikwa ma ọ bụ ọnụ iji debe ndekọ a pụrụ ịdabere na ya na nyocha nke iwu ọ bụla edepụtara na ya. Anyị ga-akọwa nke a n'ihu na ọkwa n'ọdịnihu.
Debe ụkpụrụ ziri ezi ụbọchị na oge nke BIOS na Sistemụ nrụọrụ.
Gbaa mbọ hụ na nhazi ziri ezi nke faịlụ »ihu ihu«, »resolv.conf«, »NetworkManager.conf» na »sources.list«
Na ọkwa nke ngwa eserese
Na ọkwa a enwere ọtụtụ ngwa dị mma enwere ike ịkwado mana ka ịghara ịme ndepụta ahụ buru ibu anyị nwere ike ịkwado ụfọdụ dịka:
Bleachbit bụ ngwa ọrụ multiplatform nke isi ọrụ ya bụ ịhapụ ohere na diski ike anyị, n'ụdị nke "ccleaner" a ma ama na nke bara uru na Windows. Na dị ka »ccleaner«, ọ na-enye anyị ohere ihichapụ faịlụ na-ebelata ohere nke mgbake ha.
Nke a na-echekwa nzuzo anyị na nchekwa anyị nke ọma, na-enye anyị ohere ịbawanye ohere ohere anyị na diski anyị, na-ekwenye na ndị ọzọ enweghị ike ịgbake data ma ọ bụ opekata mpe.
Ngwa ndị ọzọ dị mma nke ụdị a bụ: Sweeper, Stacer y Ntughari.
Ọ bụ ihe eserese eserese nke na-eme ka ngosipụta ngosi nke ozi gbasara oriri nke ohere na draịva siri ike, dị ka pasent ojiji, ohere n'efu, ogo akwụkwọ ndekọ na faịlụ nke OS anyị. Baobab nwere ike ịchọpụta mgbanwe na draịvụ ike n'oge ma nyochaa ha n'agbanyeghị ma ha dị n'ime ime ma ọ bụ mpaghara, n'etiti ụlọ ọrụ ndị ọzọ. Enwere ike itinye ya site na njikwa site na ọtụtụ ebe nchekwa Distros.
Ngwa yiri Baobab enwere ike itinye ya: Igwe ọkụ, Ozi JDisk, QDirStat y k4dirstat.
Ọ bụ usoro ngwaọrụ nke na-ekwe ka mmezi (nhicha) nke faịlụ na-enweghị isi ma ọ bụ karịa n'ime sistemụ arụmọrụ. Ọ gụnyere GTK + Graphical Interface, gbakwunye interface ahịrị iwu. All iji rụọ ọrụ nke ọma naghachi disk ohere. Enwere ike itinye ya site na njikwa site na ọtụtụ ebe nchekwa Distros. O nwekwara ikike iwepu ngwungwu ma chọta ihe dika:
Nsogbu faịlụ aha
Faịlụ nwa oge
Mmebi ma ọ bụ ihe mgbe ochie njikọ njikọ.
Akwụkwọ ndekọ aha efu
Ngwa ndị yiri FSLint enwere ike itinye n'ọrụ: Oyiri faịlụ Finder y GDuplicateFinder.
Ọ bụrụ na ị ma ndị ọzọ nwere ike inyere anyị aka, kwuo okwu! N'ebe ndị ọzọ, enwere m olileanya na isiokwu a dị ka ọ na-adị na mbụ na-enyere anyị niile aka ime GNU / Linux Systems otu nha ma ọ bụ karịa nke ọ bụla ọzọ! Ruo mgbe ọzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ » Kedu otu esi ebuli sistemụ arụmọrụ GNU / Linux?
Oge ndị ahụ m na-awagharị na Linux =)
Ekele m, M na-eji BleachBit na Linux Mint 19.2 m Linux ma eziokwu arụ ọrụ nke ọma maka m, ọ dị mfe ịwụnye ma jiri pro ị ga-akpachara anya mgbe ị na-eji ya na ọnọdụ Root, ebe ọ bụ na ihe ehichapụ na-efu. rue mgbe ebighebi. site ebe ahu puo nke oma
Zaghachi Hector Elizalde
Paul kwere dijo
Ọmarịcha ọkwa, mana agaghị m akwado iji Dephorban mee ihe ndị akọwapụtara, opekata mpe maka onye na-enweghị uche (dị ka m). Nke ahụ megharịrị keyboard na òké mgbe m na-abanye na desktọọpụ, n'ihi ya, m ga-eme nwụnye dum nke xserver-xorg ... Ọ dịghị ihe dị njọ, mana ejiri m awa ole na ole nyochaa otu esi edozi ya. Cheers
Zaghachi Pablo Letelier
Daalụ, Pablo. O doro anya na Deborphan bụ iwu siri ike, ebe ọ bụ na, ọ bụrụ na i nweghi ahụmịhe ma ị nabata nhichapụ nke ihe Deborpahn nwere ike ịrịọ ka ihichapụ, nsogbu dịka ndị ị kọọrọ nwere ike ibilite, etinyegoro m ọtụtụ na mbido na iwu ahụ.